WAR NAXDIN LEH: Wiil Soomaali ah oo Aabihiis ku dilay dalka Jarmalka | HalQaran.com
WAR NAXDIN LEH: Wiil Soomaali ah oo Aabihiis ku dilay dalka Jarmalka
Hamburg (Halqaran.com) – Waxaa Khamista galabta ka dhacay dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Hamburg, dil aad looga naxay oo uu geytay Wiil Soomaali ah, kaddib markii uu gacantiisa ku dilay Aabihii dhalay.
Sida warbaahinta dalka Jarmalka ay baahiyeen, Wiilkan Soomaaliyeed oo 17 sano jir ah ayaa toorey ama (mindi) u adeegsaday dilka Aabihiis oo 57 sano jir ahaa. Dilkan ayaa dhacay abaaro 15:41 PM saacadda dalka Jarmalka.
Wiilka Soomaaliga ah oo magaciisa lagu sheegay Axmed iyo Aabihiis oo lagu magacaabi jiray Nuur Faarax Xuseen, ayaa la sheegay inuu dhexmaray muran xooggan. Lama oga ilaa iyo hadda wuxuu salka ku hayay.
Booliska magaalada Hamburg oo durba goobta dilka ka dhacay tegay ayaa gacanta ku dhigay wiilka dilay Aabihiisa, iyagoona iminka wada baaritaanno la xiriira sida ay wax u dhaceen.
Mana jirto wax faah-faahin ah oo uu ilaa iyo hadda bixiyay booliska magaalada Hamburg oo ku aadan dilkaasi.
Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka ayaa aad uga naxay dilka naxdinta leh ee ka dhacay magaalada Hamburg.
Source – Halkaan Riix si aad u akhriso warkan oo Af Jarmal ku qoran.
Dil ka dhacay magaalada Hamburg
Wiil Soomaali ah oo Aabihiis ku dilay dalka Jarmalka